Laghachi na Linux ... na Funtoo! | Site na Linux
Laghachi na Linux ... na Funtoo!
Ugboko92 | | Ndị ọzọ
Okwu ole na ole na ndụ emeela ka m ree NVidia ndịna-emeputa m, na ịtinye OS X nyere m oke umengwụ ma ọ baghị uru. Ya mere, na Tọzdee nke izu gara aga, amalitere m ịnwale distros.
Agara m Ubuntu, nke masịrị m mana dịka m na-enwekarị njehie na Compiz na Intel m, n'ihi ihe ụfọdụ mgbe ụfọdụ VSync na-akwụsị ịrụ ọrụ wee rụọ ọrụ ọzọ, echere m na nsogbu ahụ nwere ike ịbụ ikike ikike nke mkpụrụ ọhụrụ ahụ tinyere, mana m enweghị ike idozi ya.
Na njedebe m kpebiri ịnwale Unity na Archlinux, arụnyere m site na ebe nchekwa ahụ mana oge Unity adịghị amalite, nkwụsị ahụ apụtaghị, n'ihi ya, m họọrọ iji nwalee ebe nchekwa na-adịghị agbanwe agbanwe na dị ka aha ya na-egosi, ọ dị mma .. ejighị n'aka (: P).
N'ihi ya, ekpebiri m ịnwale Arch mana ya na KDE, mana n'etiti ntinye m chetara ntinye nke Gentoo nke onye ọrụ ibe anyị na onye nchịkọta akụkọ Tete Plaza, yabụ achọrọ m nkuzi nkuzi Gentoo, ụbọchị 2 furu efu furu m na njedebe m nwere ike anaghị etinye KDE (ezigbo oyi akwa 8 XD), yabụ na-achọsi ike, na-enweghị sistemụ arụmọrụ na pc m, echetara m na onye ọrụ ibe anyị arụnyerela. funtoo.
Agara m lee anya na Funtoo web document, o jidere m, o yiri ka odi mfe ighota, ya mere site na Linux Mint live dvd, amalitere m ịwụnye Funtoo. Ntinye, nke were ihe dị ka awa isii, dịịrị m mfe ma bụrụ ihe na-atọ m ụtọ, nhazi nke WiFi nwere ezigbo enyi na enyi, yana nkọwa nke ọkọlọtọ onye ọrụ ọ dị mfe nghọta.
N'ikpeazụ, a bụ m, m na Funtoo KDE, yana Kernel 3.2 (ọ bụrụ na m maara, n'oge na-adịghị anya, m ga-emelite ya na ụdị dị elu .. ụlọ m na-enwe obi iru ala :), ya mere igwu egwu ole na ole na steam ma n'oge na-adịghị anya enwere ike ịgba m ume ime nkuzi banyere otu esi eme Funtoo mma :).
Ya mere, anabata gị LINUX!
PS: Agaghị m eme nkuzi na ịwụnye Funtoo, n'ihi na echere m na akwụkwọ dị na weebụ dị mfe nghọta ma ikekwe usoro kachasị sie ike ị nwere bụ ịmụ otu esi eji cfdisk.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Laghachi na Linux ... na Funtoo!
Ihe 76 kwuru, hapụ nke gị
Dị ka m gwara gị na nke ọzọ: A na-anabata gị mgbe niile !!
Came laghachiri dị ka onye isi.
Ahahahah nke a di nma xd
Zaghachi na pandev92
Ọ laghachiri dị ka Superman? Echere m, ochie na ilu? (na-ezo aka na nke ikpeazụ, na mberede, ihe nkiri nkiri lousy)
Superman abughi ezigbo dike, ọ dị ike n'ihi na ọ dị ike ma dabere na ndị edemede (s) ọ bụrụ na Lex Luthor kwụsịrị ya na kryptonite ma ọ bụ ọ bụrụ na o bibie ụwa dum.
Echere m otu ihe ahụ. Na mgbakwunye, ọ bụghị dike kwesịrị ekwesị maka ọgbọ ọhụrụ.
PS: Ndo maka isi okwu 🙁
«Ntinye nke were ihe dị ka awa isii, dị mfe ma bụrụ ihe ọchị nye m» na-enweghị okwu ...
N'otu oge, na univ. Ejiri m ụbọchị 3 iji nweta KDE na Gentoo (achọrọ gentoo na ọrụ ahụ), mgbe nke ahụ gasịrị, m chịkọtara-ọkọlọtọ-kachasị mma-na mgbakwunye-ketchup oke iwe wee laghachi Debian.
Nwoke xdd .., ogologo oge gara aga, ejiri m oge dị ukwuu iji hazie osx, yabụ ndị ahụ 6 awa na funtoo abụghị ihe ọ bụla, m na-emekwa ya mgbe na laptọọpụ m na-ele Anime xd
ọ dị ka facebook. Ya mere, ka m tinye ihe nke aka m
Uchechi Daniel dijo
@DanielC nwere mmasị n'okwu gị. #OK mba.
Ezigbo mma funtoo 😀
Ekwadoro m eix ka ị mee nyocha ọ dị ọsọ ọsọ karịa ịpụta –chọpụta.
Ma iputa -s na eix dị mma,
@ pandev92 Kedụ ụdị funtoo awụnyere? Anụ ma ọ bụ ugbu a?
Nyaahụ m na-achọ ịwụnye Funtoo, mana…. Anọ m na-eji gentoo ma ọ na-ewe iwe (Las USEs).
Zọ ị na-ege dị ka ọ dị mma, nọrọ obere oge, Amaghị m ihe m ga-ahụ ọzọ 😀
M arụnyere ugbu a ehehe, mbipụta nke iji ọkọlọtọ dị mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye kde, na mbụ ịhọrọ kde profaịlụ wee jiri akara ndị a:
Banyere anime mhh xdd, nye anime ohere, ala-eze iri na abụọ ahụ, jigoku shoujo (hell girl), ụfọdụ oge xd, ụwa naanị Chukwu ma, seitokai yakuindomo, gundam stargazer, wdg xd
nke nwere alaeze iri na abụọ ahụ dị ezigbo mma, mana ha agwụchabeghị, nke a bụ ihe ihere.
Zaghachi ka edo
Hụ mgbe m hụrụ isi ikpeazụ m nọrọ…: / .., nke a bụ njedebe xD? n'eziokwu na-esote ụbọchị m na-enwe olileanya na a ga-enwe ọzọ na nwunye na TV, ma ọ dịghị ihe haha
Yabụ ị họọrọ kernel? ma ọ bụ na ọ bụ na nke ndabara.
Maka na gentoo, ị na-ejikarị mkpụrụ ndụ.
Wụnye gentoo na kde, oge ikpeazụ ọ nyere m ọtụtụ nsogbu.
Site na ihe teteplaza na-agwa m, na na funtoo ugbu a, o nwere obere nsogbu na ọkọlọtọ.
Ee, enwere m mmasị maka anime. Usoro nke masịrị m bụ Sword Art Online, Soro no Otoshimono, Maria Holic, Lucky Star, Suzumiya. Ma m ka nwere oge iji hụta dika Evangelion, Gundam, wdg ...
Ma ugbu a, m na-achọ Animes na ọchị.
Ihe ọchị, ị ga-ahụ Nnukwu Onye Ozizi Onizuka. Ozi oma di nma (nke kachasi nma m) ihe oma ndi ozo bu Ghost na Shell na Ergo Proxy.
Na ntuziaka nwụnye m na-akwado ịwụnye kernel debian, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ nke ịchọrọ, dịka kern kita. xD
GUNDAM !! (* __ *) Achọrọ m ịhụ ha niile ga-abụ ihe ọzọ m ga-apụ 😀
M wunye funtoo, mana ahuru m na iputa-webrsync abughi ugbua. Nke ahụ ma ọ bụ Achọrọ m ịwụnye nke ahụ.
Ke idaha enye emi ọ wụnye, olee otú m nwere ike imelite portage?
Obi abụọ ndị ọzọ.
Kedu ka ị si eme gị.conf
Omuma atu: na gentoo enwerem otutu SYNC, site na otutu ebe, ebea na Funtoo, obu ya nani otu?
SYNC = »https://github.com/funtoo/ports-2012.git»
O naghị ekwe ka m họrọ profaịlụ kde.
Ugbu a profaịlụ njiko:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / arch / x86-64bit *
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / arch / pure64
Nkọwapụta ụlọ dị ugbu a:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / build / stable
 funtoo / 1.0 / Linux-gnu / ewu / ugbu a *
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / ewu / nnwale
Nkọwa profaịlụ dị ugbu a:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / ekpomeekpo / ntakiri
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / ekpomeekpo / isi *
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / flavor / desktọọpụ
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / flavor / workstation
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / ekpomeekpo / sie ike
Ugbu a profaịlụ mix-ins dị:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / audio
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / console-mgbakwunye
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / dvd
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / gnome
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / kde
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / mate
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / media
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / ebipụta
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / python3-naanị
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / rhel5-kompat
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / server-db
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / server-mail
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / server-weebụ
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / X
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / xfce
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / vmware-ọbịa
esclect profaịlụ set 15 na ihe obula
Dabere na ntuziaka nwụnye e nwere otu, ihe ọzọ bụ na ị ga-etinye mkpuchi na ihe niile.
Na profaịlụ mgbe ahụ na ụkpụrụ http://www.funtoo.org/Funtoo_Linux_Installation
lee ndu anya n’ihi na a ahotaghi ha ka I n’eme xd
sudo eselect profaịlụ tinye 15
Ee, ahụla m ndo.
Ana m agakwa maka kernel kernel.
Echere m na funtoo ga-enwe kernel nke ya.
O nwekwara nke funtools dị ka ndị nwe ala.
Mba, na-eburu n'uche na funtoo dabere na gentoo, ma e wezụga na onye okike ahụ bụ otu, enwere ike ịsị na funtoo bụ gentoo na ihe ole na ole na-akpaghị aka na kachasị xd
Ee, naanị ihe m chọpụtara, iputa-webrsync.
Rene Lopez dijo
You chọrọ ịnwa ịnwụ n'oge a? hahaha .. Hel Girl, ezigbo mma ..
Nabata nwa mmefu.
Zaghachi ka Rene Lopez
Higurashi mba Naku Koro ni, Steins; Ọnụ 😉zọ
Aghọtara m na ị bụ otu n'ime ndị kpọrọ ubuntu asị, ọ tụrụ m n'anya na ị wụnye ya.
Banyere ịwụnye ịdị n'otu na arch, m gbalịrị ya na manjaro maka nkuzi niile na archwikis nke m hụrụ, na enweghị m ike, ọ naghị amalite mgbe ịmalitegharị, nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ ndị ahụ enweghị onye na-elekọta ha, anyị ga-ahụ ihe na-eme, mana ọ bụrụ na enwere m olileanya na m ga-eme ya n'oge na-adịghị anya.
Agbalịrị m ịwụnye ubuntu n'ihi na ọ bụ naanị iso m nwere na pc nne m ..., na pc m dị ugbu a enweghị m sistemụ arụmọrụ ọ bụla, yabụ agara m ihe dị mfe. Ọ bụ ezie na anọghị m awa 24.
I meela ogologo oge, oge ikpeazụ m gbalịrị Ubuntu anaghị agafe LiveCD 😀
Anyị na ọbụna na na. Maka nke ahụ, anọgidere m na Debian Stable.
6 awa! Oo chimoo!!! Ole oge ole ụfọdụ nwere. Ọ dabara nke ọma na nrụnye m anaghị adịru elekere 2 (na nke kachasị njọ) Ọ dị mma, ekwesịrị m ikweta na m na-etinye Xubuntu ma ọ bụ Linux Mint XFCE. Ma ozugbo SolydX. Ọ ga-abụ na m nwere ihu ọma na ihe niile na-arụ ọrụ m oge niile. Ọ bụ ezie na oge ikpeazụ m tinyere Xubuntu (13.04) ihe ntanetị ntanetị apụla n'anya! Ejisiri m ike ijikọ na USB WiFi dongle na obere nchọta Google (nkeji 5, ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dịghị obere) wee nweta azịza ya. Oge nwụnye na oge <1 hour.
Ọ bụ oge n'efu na m na-arara onwe m nye na-ekiri ihe nkiri na Satọde, n'ihi ya enwere m ike ile ihe nkiri ma wụnye na desktọọpụ pc n'otu oge ahụ, ọ bụghị oge lara n'iyi, kama jiri xd mee ihe
maa onye ọrụ ahụ kwụsịrị ịdị na-eme ọtụtụ ihe ...
Yabụ kedu ihe dị iche na Gentoo na Funtoo?
Ihe dị iche bụ na Funtoo dị ka ngalaba nyocha nke gentoo mana ọ ka kwụsie ike. O nwere onu ogugu nwere oghere banyere ya na nkezo nke kachasi anya.
Awa 6 echichi? Oo chimoo!
Wụnye osx na hackintosh mbụ m were ụbọchị xD
Amaara m na ọ na-eche, bro.
Ọ bụrụ na ịwụnye distro na-ewe karịa 30 nkeji, anaghị m etinye ya
Ọmịiko. Ubuntu na-ewe ihe dị ka otu awa.
ndị kpọrọ asị, bịakwute m
ihe nrụpụta maka ubuntu, mint, wdg anaghị adịgide otu elekere
I tufuru oge nbudata iso xD
Otu ISO m na-ebudata na 15 nkeji ma ọ bụ obere. Friend nwere enyi Internetntanetị na-adịghị nwayọ @pandev 🙂
Enweghị m ịntanetị nwayọ, enwere m megabytes 15, mana ọ dị ka njikọ nke ụlọ ọrụ adsl m na sava ubuntu, na-a suụ xDDDD, ọ naghị aga karịa 400 kb / s
Ọ bụ ya mere m ji eji Debian Stable ebudatara na iyi.
Wụnye Mandriva ị ga-agwa m ogologo oge ahụhụ gị ga-adị.
ma ọ naghị amalite na ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ spyware xD
Ummmm .. Anyị ga-ahụ ma m chọrọ inye Funtoo uche, ebe ọ bụ na mụ na Gentoo na-egwuri egwu iji tinye ya. : /
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh agaghị ekwe ka m wụnye funtoo
Nsogbu na gcc, kdemeta.
Ikwesighi imelite gcc, ma oburu na imelite ihe, gbaa mbọ mee ihe niile –exclude gcc
Ọ bụ mmelite.
Ma ugbu a kwa, ọ gaghị ekwe ka m wụnye nchịkọta libnl ndị ọzọ.
Ezigbo m ikwughachi pụta -uDNav ụwa –exclude gcc na libnl
O yiri ka ọ na-aga nke ọma.
N'ezie, abanyelarị m n'ime funtoo, mana na tty, achọrọ m ịwụnye kde na ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị ugbu a karịa ka ọ dị mma.
Etu ị ga - esi rụọ ọrụ USE ndị dị na acha anụnụ anụnụ na n'ime akụrụngwa ().
Agbalịrị m na package.use na make.conf
Ma ọ bụghị m na-ezighị ezi, ma ọ bụrụ na ha na-acha anụnụ anụnụ, ihe niile bụ ok .., iji wụnye kde, jiri m were ọkọlọtọ, wee wụnye kdebase meta 🙂
Ee, na-acha anụnụ anụnụ bụ na ha enweghị ike itinye.
You mere wdg-melite, site na ịtọlite ​​ojiji ọkọlọtọ oO? na ngwugwu.use?
Na m nwere otu njehie, kde enweghị ike itinye, ọ gwụla ma gcc emelitere, n'ihi na na mmelite ya agbakwunye ọ bụ ihe ọ rịọrọ.
Enwere m ike na-enweghị imelite kde, nke gị dị ịtụnanya, a na-eche na site na k nke na-abịa na nke atọ ị nwere ike iwunye kde nwayọ mhhh, emere m ya otu a mgbe m hụrụ na gcc ọhụrụ ahụ achịkọtaghị ma ọlị.
Hmm, download funtoo ugbu a.
Naanị m gbakwunyere ihe ole na ole na package.use
mmm, ike agwula m funtoo. Enweghị m ike ime ihe ọ bụla.
You gbasoro nduzi weebụ na leta oO?
Agbanyeghị ọ dị m ka iju.
Enweela m koodu nsogbu na nnọkọ ahụ
Ee, olee otu ọ na-aga?
Anọ m na-eche ime usoro ahụ ọzọ, mana pfff, ọzọ.
M ga-etinye ya ọzọ.
Nwere ike ịgafe m gị make.conf. Iji nwalee 😀
Ohh Pandemonium ị hapụrụ ogige Gnome <_
Ihe dị mma bụ na ịnwere ike ịwụnye KDE na sistemụ ị na-eji
Zaghachi ka freebsddick
Na - emesị jiri Aqua counterpart maka Linux. KDE bụ otu n'ime ihu dị mma, agbanyeghị na m na-eji ya karịa maka Slackware n'ihi arụmọrụ ya nke wepụrụ unyi ya karịa Ubuntu na Debian.
Frank Davila dijo
Enyi na funtoo peeji na-ekwu na site na sistemụ arụnyere ị nwere ike iwunye funtoo, olee ebe m ga-esi nweta usoro iji wụnye ya na ubuntu 12.10?
Zaghachi Frank Dávila
Amaghị m, mana ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya site na ndụ cd nke ubuntu ma ọ bụ Linux na-adị nwayọ, na-agbaso usoro ntụzi ụkwụ site na nzọụkwụ:
Kwụpụ Nzọụkwụ! xD ma jụọ naanị mgbe ị nwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ ahụ anaghị arụ ọrụ maka gị xD
Ihe na - eme bụ na achọghị m igbu oge, na agbanyeghị na enweghị m ịntanetị n'ụlọ m wee jikọọ n'ụlọ nwanne m nwanyị wee budata foto ahụ na ibe ahụ achọghị m ida akwụkwọ ubuntu m, m nanị chọrọ ịgbanwe OS.
Gbalịa mebere a igwe na mgbe ahụ, na wụnye a fechaa wm dị ka openbox, ma ọ bụrụ na ọ gara nke ọma i nwere ike na-agbalị iji wụnye ya na gị na PC .., ma bia, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji funtoo, ị na-aga igbu oge :).
Ọ dị mma nke ahụ ... Enwere m olileanya na ị gaghị alaghachi na ikpo okwu ọzọ. Claeo ma ọ bụrụ na ikpo okwu ị na-eji na-eru eru dị ka ndị dị otú ahụ 😛
Have nweela ike ịwụnye firewall dịka apparmor ma ọ bụ selinux, ma ọ bụ ịnwere ya dịka i siri wụnye ya, ọ bụrụ na m soro ntuziaka ndị gentoo wụnye kernel siri ike na-enye m njehie na ọrụ udev anaghị m aghọta njehie ahụ dịka ị gbalịa ịgụ ihe na / dev chọọ ya mana enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla, ugbu a ọ bụrụ na m maliteghachi na kernel kernel, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, mana enweghị m ike ịwụnye firewall, echere m na m ga-agbanyụ ọrụ ahụ mana ọ bụrụ na m gbanyụọ ya, ihe niile kwụsịrị ịrụ ọrụ, ya bụ, keyboard, òké, wdg.
Anyị na-amalite ọrụ ọhụrụ, na imepụta ọhụrụ
Dragon Ball: Kpatụ Agha maka gam akporo naanị